Warshad Birta Shiinaha iyo soosaarayaasha | Lead
Adeegyadayada xaashida biraha qaaska ah waxay kuu fidiyaan xal wax ku ool ah oo baahida loo qabo baahiyahaaga wax soo saar. Waxaan leenahay xawaare sare, xaalad farsameynta qalabka birta farshaxanka ah ee ugu habboon soo saarista waara, qaybaha biraha loo isticmaalo dhamaadka leh soo noqnoqda
Caadadayada bir xaashi adeegyadu waxay bixiyaan xal kharash-ool ah oo dalab ah baahiyahaaga wax soo saar. Waxaan leenahay xawaare sare, xaalad farsameynta qalabka farsamada birta ah ee ugu habboon soo saarista waarta, dhamaadka biraha isticmaalka qeybaha biraha leh soo noqnoqoshada, mugga hooseeya illaa heerka sare iyo soosaarka isku-dhafka sare ee lagu farsameeyay tilmaamahaaga.
Shaqada biraha xaashida ah waa howsha bir sameynta oo sameysa wax soo saar cusub oo ka sameysan noocyo kala duwan oo bir ah. Nidaamyada kululaynta waxaa loo isticmaalaa in lagu adkeeyo ama lagu jilciyo birta xaashida iyadoo la kululeynayo ama la qaboojinayo illaa ay ka gaarto heerka adag ee la doonayo, sidoo kalena sidaas ayay ku tahay qaab lagu shaqeyn karo. Dhowr farsamooyin muhiim ah ayaa loo isticmaali karaa geedi socodka daaweynta kuleylka, oo ay ku jiraan annealing, deminta, xoojinta roobka iyo xanaaqa
Sida ay u Shaqeyso Been Abuurka Birta
Waxaa jira 3 marxaladood oo guud oo ah habka been-abuurka birta, dhammaantoodna lagu dhammayn karo noocyo kala duwan oo qalab been abuur ah.
● Ka saarida Waxyaabaha: Inta lagu jiro marxaladdan, qalabka shaqada ee cayriin ayaa loo jarjarayaa qaabka la doonayo. Waxaa jira noocyo badan oo qalab iyo geedi socod makiinadeed oo birta ka saari kara qalabka shaqada.
● Wax ka beddelidda qalabka (sameynta): Qalabka birta ah ee cayriin waa la foorarshay ama waxaa loo sameeyay qaab 3D ah iyada oo aan wax qalab ah laga saarin. Waxaa jira noocyo badan oo habab ah oo qaabeyn kara qaybta shaqada.
● Isugeynta: Badeecada la dhameystiray waxaa laga soo ururin karaa dhowr shey oo shaqeynaya.
● Xarumo badan ayaa bixiya adeegyo dhameystir sidoo kale. Hawlaha dhammeystirka badanaa waa lagama maarmaan ka hor intaan badeecada birta laga soo saaray ay diyaar u ahayn suuqa.
Codsiyada Xaashida Birta
Xiritaanka - Birta xaashida waxay bixisaa hab kharash-ku-ool ah oo lagu been abuurto qalabka wax soo saarka, sanduuqyada iyo kiisaska codsiyada kala duwan. Waxaan dhiseynaa xayndaabyada dhammaan noocyada, oo ay ku jiraan rackmounts, "U" iyo "L" qaababka, iyo sidoo kale consoles'ka iyo consoles'ka.
Chassis - Chassis-ka aan alifeyno waxaa caadi ahaan loo isticmaalaa in lagu xareeyo kontaroolada korantada, laga bilaabo qalabka gacanta lagu qaato ilaa qalabka baaritaanka warshadaha waaweyn Dhamaan jiifku waxaa loo dhisay cabbir muhiim ah si loo hubiyo isku dheelitirka qaabka godadka ee u dhexeeya qaybaha kala duwan.
Qaansooyinku –waxay dhisaan qaansooyin qaas ah iyo waxyaalo kala duwan oo xaashi ah, oo si fiican ugu habboon labada barnaamij ee miisaanka fudud ama goorta loo baahdo heer sare oo u adkaysi u leh daxalka. Dhammaan qalabka iyo dhejiyeyaasha loo baahan yahay ayaa si buuxda loogu dhex dhisi karaa.
Goynta laser, jarista plasma, goynta Waterjet, feerista CNC, foorarsiga CNC, alxanka, isu imaatinka, iwm
Aluminium, Bir, Bir daxal laheyn, naxaas, naxaas
Anodized, sandblasted, safeeyey, budada dahaarka leh, korantada, iwm
Mashiinka CNC, CNC leexinta, Ku tumashada birta, Birta xaashida, Dhamaaday, iwm
Hore: Ku tumashada birta
Xiga: Qaybaha Titanium
Qaybo naxaas ah